झक्कु सुवेदी र रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानबीच यसरी हुँदैछ प्रतिस्पर्धा
काठमाडौँ । रोल्पाली झक्कु सुवेदीको नाम फेरि एक पटक काठमाडौँबासी माझ चर्चामा आएको छ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ६ मा प्रतिनिधिसभाका लागि उठाइएपछि
‘हेभीवेट’सँग प्रतिस्पर्धा गर्दै अनिल, प्रकाशमान र रवीन्द्रबारे यसो भन्छन्
काठमाडौँ । काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर १ भन्नेबित्तिकै अहिले दुईजना व्यक्तिको नाम सुनिन्छ । तीमध्ये एक हुन् कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंह । उनीसँगै उत्तिकै चर्चामा रहेका अर्का व्यक्ति हुन्, बीबीसी
ठूलो जिल्लामा ठूला दलका ठूलै उम्मेदवार, कुन क्षेत्रमा कुन दल बलियो ?
विनु तिम्सिना मोरङ । एक नम्बर प्रदेशको जिल्ला मात्र होइन, नेपालको आर्थिक नाका विराटनगर रहेको जिल्ला । व्यापारिक हिसाबले मात्र मोरङको चर्चा हुँदैन । उद्यमीहरुको पनि शहर हो । नेपालको
भोट फकाउन खेतबारीसम्म उम्मेदवार (फोटोसहित)
रामचन्द्र घर्ती जाजरकोट । जाजरकोटमा वाम गठबन्धनका एक उम्मेदवार किसानका खेतबारीमा गएर भोट माग्न थालेका छन् ।निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ अन्तर्गत प्रदेश सभा (क) का उम्मेदवार गणेशप्रसाद सिंह खेतबारीमै गएर
श्रीमान्–श्रीमती उम्मेदवार ! १८ जोडी चुनावी मैदानमा
चमिना भट्टराई काठमाडौंँ । मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलका केही नेता श्रीमतीसहित चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । यो निर्वाचनमा प्रमुख दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा
डडेल्धुरामा वाम गठबन्धनसँग भिड्दै देउवा, यस्ता छन् जीत-हारका आधार
आशिष मल्ल डडेल्धुरा । प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधि सभाका लागी प्रत्यक्ष तर्फबाट चुनाव लड्दैछन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना यता संसदीय निर्वाचनमा अपराजित देउवा यसपटक पनि गृहजिल्ला
राजेन्द्र श्रेष्ठ ताप्लेजुङ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक जननेता मदन भण्डारीको ताप्लेजुङस्थित जन्मघरमा पुग्नु भएको छ । अध्यक्ष ओली ताप्लेजुङको मैवाखोला गाउ पालिकास्थित ढुगेसाँघुको ढोटनेमा रहेको
गोरखामा यसरी भोट फकाउँदै बाबुराम (फोटो फिचर)
काठमाडौँ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग प्रतिनिधिसभाका लागि गोरखा २ बाट प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । कांग्रेसको साथ पाएपछि बाबुराम अहिले चुनावी अभियानमा